Global Voices teny Malagasy » Mpikatroka Ejipsiana Ankavia Mahinour El-Masry Noafahana Rehefa Nigadra 125 Tany Am-Ponja · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Septambra 2014 11:56 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Andriamifidisoa Zo
Afisy avoahy Mahinour. Nozarain'i @HaniShukrallah tao amin'ny Twitter
Rehefa nandany 125 andro tany am-ponja, dia nahazoana didy ny havoaka ny fonja Ejipsiana ilay mpikatroka amin'ny elatra ankavia eo amin'ny tontolo politika antsoina hoe Mahinour El-Masry androany.
Nampihantona ny didy enim-bolana hamonjana an'i El-Masry ny fitsarana iray any Alexandria, hoy ny tatitry ny Mada Masr . Tamin'ny volana Mey ilay mpikatroka no nogadraina rehefa nakarina tany amin'ny fitsarana ambony ny didy mampigadra azy, miaraka amin'ny mpikatroka valo hafa, roa taona, raha nanitsakitsaka ilay lalàna momba ny fihetsiketsehana an-dalambe izay efa nampiady hevitra, izay mandrara ny fanaovana fihetsiketsehana rehetra ao amin'ny firenena. Nosamborina i Mahinour noho ny fihetsiketseha-panoherana nataony teo an-tokotanin'ny fitsarana tamin'ny volana desambra izay nitsarana polisy roa voampanga ho namono an'i Khaled Saeed. Saeed  no ilay heverina ho Mohamed Bouazizi  [Tonizia] -n'ny Revolisiona ejipsiana.
Tamin'ny Jolay, nihena ho enimbolana ny didy mihatra amin'ny Mahinour, ary nisy vaovao tsara hafa ihany koa nanaraka androany rehetra nanipy ny raharaha ny tao amin'ny fampanoavana.
Nanomboka nanao fitokonana tsy hihinan-kanina niaraka tamin'ilay Ejipsiana mpikatroka sady blaogera Alaa Abd ElFattah i Mahinour tamin'ny 25 Aogositra. Navotsotra  tamin'ny 15 Septambra i Alaa Abd ElFattah, sy ireo gadra politika hafa.
Niarahaba izao vaovao namoahana an'i Mahinour izao ny mpiserasera.
Ao amin'ny tontolo izay sarotra ny mitady vaovao tsara, dia nanambara ny famotsorana azy ho “ny vaovao tsaran'ny andro” ilay Ejipsiana blaogera mazoto manoratra antsoina hoe Zeinobia:
Mahinour El-Masry is released from detention pending trial. The good news of the day
— Zeinobia (@Zeinobia) September 21, 2014 
Noafahana tamin'ny famonjana azy i Mahinour El-Masry. Vaovao tsaran'ny androany
Mizara fihetseham-po mitovy amin'izany i Yasmine Khalifa:
Amidst the crappy news of multiple explosions across Egypt there is a glimmer of happy news that Mahinour will be released.
— Yąsmine Khalifa (@jazkhalifa) September 21, 2014 
Ao anatin'ny vaovao manalika maro mipoaka manerana an'i Ejipta dia indro misy tsirim-baovao mahafaly milaza fa hoafahana i Mahinour.
Saingy fantatr'i Mona Seif ny mety handiso fanantenana an'i . Hoy ny siokany:
ماهينور هتخرج و هتبقى مقهورة اللي معاها في نفس القضية لسة محبوسين. خاصة اسلام اللي ماكانش مشارك في الوقفة ..الحرية لاسلام و عمر و لؤي و ناصر
— Mona Seif (@Monasosh) September 21, 2014 
Havoaka i Mahinour saingy ho diso fanantenana izy fa mbola voatazona ireo mitovy raharaha aminy, indrindra fa i Islam, izay tsy nandray anjara akory tamin'ny fihetsiketsehana. Avoahy i Islam, Omar, Luay ary i Nasser.
Raha mbola tany am-ponja i Mahinour no nahazo ny Lokan'ny Zon'olombelona Iraisampirenena Ludovic Trarieux  2014, loka fanome isan-taona omen'ny mpisolovava amin'ny mpisolovava miaro ny zon'olombelona. Kisendrasendra, ny anjara voalohany nivoaka tamin'ny 1985 dia nomena ilay mpitarika Afrikana Tatsimo Nelson Mandela raha mbola tany am-ponja izy.
Milaza ny mpisolovava Gamal Eid fa ny famoahana azy dia ao anatin'ny teti-panoron'ny governemanta hanatsarana ny endriny. Hoy ny siokany:
بعد الف مبروك لماهينور المصري رأيي الشخصي :مناورة سياسية لنظام مستبد ماهينور حتسلم جائزة دولية حقوقية الشهر الجي! وتحسين صورة قبل سفر الرئيس
— Gamal Eid (@gamaleid) September 21, 2014 
Aorian'ny fiarahabana an'i Mahinour, Mino aho fa ny famoahana azy tany am-ponja dia ao anatin'ny tetika politika ataon'ilay fitondrana mpangeja. Handray ny loka i Mahinour amin'ny volana ambony. Ary natao izany hanatsarana endrika ny firenena mialoha ny ivoahan'ny Filoha any ivelany
Am-pandehanana  any Etazonia hanatrika ny Zaikaben'ny Firenena Mikambana any New York amin'izao fotoana izao ny filoha Ejipsiana Abdel Fattah El Sisi.
Fa mbola tsy mifarana hatreo ekory ny dian'i Mahinour miaraka amin'ny rafi-pitsarana ejipsiana. Mbola misy raharaha miandry azy ao amin'ny komisariàn'ny polisy ao Raml, izay iampangana azy sy ireo 12 hafa ho nanimba ny komisarià sy nandratra polisy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/22/64325/
 Mada Masr: http://www.madamasr.com/content/court-suspends-mahienour-al-massrys-sentence-orders-release
 nogadraina : https://mg.globalvoices.org http://www.amnesty.org/en/news/human-rights-lawyer-latest-victim-egypt-s-repressive-protest-law-2014-06-27
 Saeed: https://mg.globalvoices.org https://globalvoicesonline.org/2010/06/15/egypt-my-name-was-khaled-and-i-was-not-a-terrorist/
 Mohamed Bouazizi: https://mg.globalvoices.org https://globalvoicesonline.org/2010/12/23/tunisia-unemployed-mans-suicide-attempt-sparks-riots/
 Navotsotra: https://mg.globalvoices.org https://globalvoicesonline.org/2014/09/15/egyptian-blogger-alaa-abd-el-fattah-released-on-bail/
 September 21, 2014: https://twitter.com/Zeinobia/status/513690091907457024
 September 21, 2014: https://twitter.com/jazkhalifa/status/513676667177680896
 September 21, 2014: https://twitter.com/Monasosh/status/513696146813120512
 Lokan'ny Zon'olombelona Iraisampirenena Ludovic Trarieux: https://mg.globalvoices.org http://www.ludovictrarieux.org/uk-index.htm
 September 21, 2014: https://twitter.com/gamaleid/status/513742376679260162